By မျိုးပပစန်း 1 October 2019
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရှိပြီးသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ၌ အမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင်များက တိုးချဲ့၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွား ရန် အလားအလာများ ရှိနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI) ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မောင်မောင်လေးက ပြောသည်။
ဒေါက်တာ မောင်မောင်လေးက“အသစ်လာတာတော့ သိပ်မပါဘူး။ ရှိထားပြီးသားတွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ တိုးဖို့ လာ ဆွေးနွေးတာ။ အဓိကတော့ မြန်မာနဲ့ စီးပွားရေးမှာ လက်တွဲလုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီအဟောင်းတွေ မခွာသွားအောင် သူတို့ တိုး ချဲ့မယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သွားကြမယ်ပေါ့။ ကဏ္ဍစုံကို သူတို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ အရောင်းအဝယ် လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ လည်း စိတ်ဝင်စားတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ UMFCCI ရုံးချုပ်၌ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်က ပြုလုပ်သော “Business Meeting with US-ASEAN Business Council Delegation” ဆွေးနွေးပွဲ၌ ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲကို အမေရိကန် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများနှင့် ကုန်သွယ်မှုများ တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ရန် အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံ US-ASEAN Business Council နှင့် UMFCCI အသင်းချုပ်တို့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr.Scot Marciel ၊ အမေရိကန် ထိပ်သီး စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီများ ပါဝင်သော Abbott, Amazon, Bower Group Asia, Chevron, Chubb, Coca-Cola, Diageo, Ford, Google, Jhpiego, Master Card, Visa တို့မှလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ် ၃၀ ခန့်နှင့် လုပ်ငန်း ၁၆ ခုမှ ပါဝင် ဆွေး နွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံ အမတ်ကြီး H.E. Mr.Scot Marciel က“ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်း ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို မြှင့်တင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှာဖွေနေတဲ့ အမေရိကန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ကတိကဝတ်ကို ထင်ဟပ်ပြသနေပါတယ်”ဟုလည်း အမေရိကန်-အာဆီယံ စီးပွားရေး ကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်များကို ဧည့်ခံသည့်ပွဲ၌ ပြောကြားသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာရပ် ဆိုင်ရာများ၊ ငွေပေးငွေချေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ လက်လီ လက်ကားရောင်းဝယ် ဖောက်ကားသည့် လုပ်ငန်းများ အစရှိသည့် လုပ်ငန်များတွင် တိုးချဲ့သွားရန်ရှိကြောင်း စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်က ထုတ်ပြန်သည့် UMFCCI ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် လာမည့် တပတ်အတွင်း၌လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံမှ စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော တာဝန်ရှိသူက မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများနှင့် လာရောက် ဆွေးနွေးရန် ရှိနေကြောင်းလည်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ လာရောက် ဆွေးနွေးခြင်းသည် မြန်မာ့စီးပွားရေး အတွက် အလားအလာကောင်း တခုလည်း ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက သုံးသပ်ထားသည်။
US-ASEAN Business Council မှ President and CEO ဖြစ်သူ Mr. Alexander C. Feldman က“အဓိက ကတော့ ရင်းနှီးမြှုုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ဖို့ပါ။ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ အများအပြားလည်း ပါပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှု ရော၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများပါ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွားကြမှာ ဖြစ်တယ်”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တယ်လီကွန်းလုပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ်ငန်း၊ လက်ကားရောင်းချခြင်းနှင့် ဖြန့်ချိရေး လုပ်ငန်းများကို အလျင် အမြန် တိုးတက်စေချင်ကြောင်းလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း UMFCCI ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
မြန်မာတွင် ရှိပြီးသားဖြစ်သော အမေရိကန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်သွားကြမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးမြှင့်ရေး၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပေါ်ထွက်လာသော ဈေးကွက်ကို စီးပွား ရေး အရ အခြားနိုင်ငံများနှင့်အတူ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေးနှင့် စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို အမေရိကန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင်များက ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် မော်တော်ကားလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများတွင်လည်း အမေရိကန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပိုမို ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားကြမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အနေနှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် သြဂုတ်လကုန်အထိ အမေရိကန်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ ၂၀ ကျော်က အမေ ရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၃၂ ဒသမ ၇၉၆ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်ထားကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (DICA) စာရင်းများ အရ သိရသည်။
DICA ညွှန်ကြားရေးမှူး တဦးက“မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှထားတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ထဲမှာ အမေရိကန်က အဆင့် ၁၃ ရှိ တယ်။ သူတို့က ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ စွမ်းအင်နဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ အများဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နံှထားတယ်” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် အမေရိကန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အနေနှင့် ဗီဇာ၊ မာစတာကတ်များနှင့် ငွေပေးချေသော လုပ်ငန်း များ (ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာ လုပ်ငန်းများ)၊ စွမ်းအင် လုပ်ငန်းများနှင့် လက်လီလက်ကား ရောင်းဝယ် ဖောက်ကား သည့် လုပ်ငန်းများကို စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေကြကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
အမေရိကန်-မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေး အနေနှင့်လည်း၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ၁၁ လကျော်တွင် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈၄၇ သန်းကျော် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။